BitBucket: GitHub အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု | Linux မှ
BitBucket - GitHub အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် desktop သို့မဟုတ် web အတွက် application တစ်ခုကိုတီထွင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ code ကို version control system တွင်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မူရင်းအတွေးအခေါ်ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲမှုအသစ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်း၏ "အကိုင်းများ" ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ဒီစနစ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အားသာချက်အချို့ပဲ။ ကျနော်တို့ရှိသည်အကောင်းဆုံးလူသိများသည် git, မာကျူရီ နှင့်ရပ်ကွက်အဘိုးနီးပါးမေ့လျော့ အဖျက်သမားများ.
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သကဲ့သို့, ငါတို့ရှိနိုင်ပါသည် ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်သို့မဟုတ် Cloud တွင်ဖြစ်ခြင်း GitHub အကောင်းဆုံးလူသိများသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။
ကဲ့သို့သောအလွန်ကောင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် .ရာဝတီ, GitLab ငါအကြိုက်ဆုံး ကျောက်တံတား အရာသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းအချို့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး, ငါတို့သူတို့အဘို့အပေးဆောင်ရပါမည်။
ကျောက်တံတား သုံးပြီး log in လုပ်နိုင်တယ် ID ဖွင့်ပါ။၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့် Facebook က, အ Google, အ တွစ်တာ သို့မဟုတ် GitHubဒါကြောင့်မကြိုးစားပါနဲ့ အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ Hotmail တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထို site ပေါ်တွင်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်မဟုတ်လျှင်အလုပ်မလုပ်😛
ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသောနောက်ထပ်အားသာချက် ကျောက်တံတား အများအပြားရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ပုဂ္ဂလိကသိုလှောင်ရုံရှားပါးသောဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်သော parameters များကိုပြင်ဆင်စရာမလိုပဲ၊ workgroups သို့မဟုတ် HTTPS ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့နိုင်ငံမှာ ISP တော်တော်များများကသတ်သတ်မှတ်မှတ် port တွေပိတ်ထားတယ် Gitဒါပေမယ့် ကျောက်တံတား ဒါကပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့၊ ငါတို့မှာအကောင့်ရှိရင်၊ လည်ပတ်မှုတချို့လုပ်ပြီးတာနဲ့၊ ငါတို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်။
ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကျောက်တံတား ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုပြုပြင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံး repository ကိုရိုးရိုးလေးဖန်တီးရန်ညွှန်ကြားချက်များပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ host ပြုလုပ်မည့် code အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့စတင်နိုင်သည်။
သာမာန်အားဖြင့် Cloud တွင် Git ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ အများသုံးနှင့်သီးသန့်သော့များကိုပြုပြင်ရမည်၊ PC နှင့်ဆာဗာအကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာမှမလုပ်ရပါ။
ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ကျောက်တံတား ဒါဟာငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာပဲ GitHubလူတိုင်းတွင်သူတို့၏အရသာနှင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်များရှိသည်မှာသေချာပါသည် ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် သင်ကြိုက်သလောက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » BitBucket - GitHub အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု
ဒီဆာဗာအချို့မှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရမယ်။ C (Gtk), Vala နဲ့ PyGTK မှာရေးထားတဲ့ code တွေအများကြီးရှိတယ်။ အဲဒါကိုငါတိုက်ရိုက်ဝေမျှဖို့ကွန်ယက်ထဲကိုဘယ်တော့မှမတင်ဘူး။
။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ developer အများစုက Github ကိုသုံးတယ်၊ ဥပမာ Mint community ဒါမှမဟုတ် MATE and Gnome project တွေပေါ့။
ငါသည်လည်း BitBucket ကိုကြိုးစားပြီးလေ့လာခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းတွင် GitHub မရှိသော forks syncing ဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ သို့သော် GitHub သည် HTTPS အောက်တွင် Git ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်၊ Third-party tools များ (Open Build Service, Travis-CI စသည်) နှင့်ပိုမိုပေါင်းစပ်ပြီး static web page များကိုအခမဲ့ hosting (သင်အမှန်တကယ် Firefox OS application များကိုလက်ခံနိုင်သည်) ရှိသည်။
သို့သော် HTTPS ဖြင့် Push and Commit ကို execute လုပ်ရန် .. ငါတို့အတူတူပဲပြောနေ၊ ဟုတ်လား?
အဘယ်သူမျှမ Github ကဲ့သို့ရိုးသားစွာရှိပါသည်။
Github rulez ။
private repositories နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းသလဲ၊
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးလူသိရှင်ကြားဖြစ်သင့်သည်
Elav သည် private repositories ကိုထောက်ခံပါက၎င်းသည်စီးပွားဖြစ် software ကိုထောက်ပံ့သည်။
လူးကပ်စ, Elav သူတို့ကပုဂ္ဂလိက repositories ကိုသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ် software ကိုထောကျပံ့ပွောခဲ့သလဲ
Elav သည် BitBucket တွင်ကိုယ်ပိုင် repositories ဖန်တီးရန် (ပေးဆောင်ရန်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသာဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ရှင်းလင်းချက် / အသုံးပြုသူအား၎င်းကိုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
ဆော့ဗ်ဝဲအားလုံးသည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောမတူပါ။ ၎င်းသည်မကောင်းမှုမဟုတ်သလိုမကောင်းသောအရာလည်းမဟုတ်၊ အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
သင်ဟာသီးခြားဆော့ဗ်ဝဲတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသင့်မှာအသုံးများတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပြီးသင့်မှာမူရင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုပါစို့။ ယခုတွင်သင်သည် open source ကိုထောက်ပံ့ပြီး code ကိုသာမန်လုပ်ဆောင်ချက်များမှထုတ်လွှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ မင်းဘာကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလဲ
ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်သင်၏လျှောက်လွှာအားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သင့်အားဝင်ငွေ၊ အခြားမိန်းကလေးများ၊ ဖောက်သည်များစသည်ဖြင့်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုကုဒ်သည်သင့်အားထိန်းသိမ်းပြီးအခြား developer များနှင့်ကွဲပြားခြားနားစေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုကုဒ်ကိုထုတ်ပေးပါက၊ မည်သူမဆိုသင်၏အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုထူးခြားအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ဝင်ငွေဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ငါသဘောမတူရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုနားလည်ပြီလား။ ဆော့ဗ်ဝဲအားလုံးအခမဲ့မဟုတ်ရပါ။ သင်၏ ၀ င်ငွေသည်အခြားအရင်းအမြစ်မှလာပါကသင်၏ကုဒ်များအားလုံးကိုထုတ်ပေးရန်အရာအားလုံးကိုပေးပါ။ သို့သော်သင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတီထွင်ခြင်းမှအသက်ရှင်ပါကထိုဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုမတတ်နိုင်ပါ။
Elav သည် "" Cinnamon for applet tutorial "နှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်လုပ်သောအကြောင်းအရာကိုဖျက်ပစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ linux မှအသုံးပြုသူများသည်ပြင်ဆင်ထားသောအမှားနှင့်မမှားနိုင်ပါ။
@marianogaudix mail စာပို့ write
@Lucas - လူတိုင်း၏လက်လှမ်းမီမှုနှင့်ဗဟုသုတ၊ ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်စီမံကိန်းများအတွက်မလိုအပ်သည့်အရာများရှိပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကသိုလှောင်ခန်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြwithနာကဘာလဲ။
github တွင်သင်၌သီးသန့် repositories ရှိလိုလျှင်သင်ပေးရလိမ့်မည်၊ Bitbucket တွင်သင်ငွေပေးစရာမလိုဘဲ private repositories ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ပိုပေးဆပ်ရန်ရှိပါကအသုံးပြုသူ ၅ ယောက်သာထို repositories တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူအရေအတွက်အရကန့်သတ်ချက်မရှိသော github နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီတွင်သင်၏အရသာသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏ကောင်းကျိုးများရှိသည်။
@kaltwulx သင်ထင်မြင်ချက်ကိုမင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးဖြတ်နေတယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာကဲ့သို့ ... ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး ကပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ သင်သည်အလွန်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ပါကသင်ပိုမိုအာရုံခံစားမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင့်ကို $$ နှင့်အခြားအရာများကိုလုပ်ရန်သင့်အား $$ ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
Bitbucket သည် Github အဆင့်တွင်ရှိနိုင်သော်လည်း Atlassian (ကုမ္ပဏီအတွက်) သည်အခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ကြယ်ပွင့်ကစားသမားလည်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် Github ကို Github Inc မှပြုလုပ်သည်။ ကတိကဝတ်အဆင့်ကိုသတိပြုမိပါသလား။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, Mercurial ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Bitbucket ကိုအသုံးပြုသည်။ ပုဂ္ဂလိကအတွက် Github သည်မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်။
Atlassian တွင် Bitbucket မှအပမည်မျှရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ https://www.atlassian.com/software
ငါသည်လည်း Bitbucket ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက် GitHub နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးမားဆုံးအားသာချက်ကတော့ငါဟာ GIT repositories (သိုမဟုတ် Mercurial repositories) ကိုငါဖန်တီးနိုင်တာပါပဲ။ ငါနဲ့အတော်အသင့်ဆုံးမှာမူတည်ပါတယ်။
Elav၊ PC နှင့်ဆာဗာအကြားယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးရန်မလိုဟုသင်ပြောသောအရာ။
Terminal ထဲကိုဝင်ပြီး RSA key ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုမလုပ်ချင်ဘူးလား။
အခု O_O တစ်ခုခုကိုငါမလုပ်တော့ဘူး
Atlassian မှဖန်တီးခဲ့သော Windows နှင့် Mac အတွက် SourceTree ကိုသတိပြုမိသလားဆိုတာကိုတော့သင်မသိရသေးပါ။ ၎င်းသည် Bitbucket ကုမ္ပဏီအတူတူဖြစ်ပြီး git client နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သူတို့ပြောခဲ့သည့် linux ဗားရှင်းထွက်ပေါ်လာမည်ဟုဆိုသော်လည်းသူတို့၏ချက်ချင်းအစီအစဉ်များတွင်မရှိပါ။
မင်းမှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိရင် GitHub နဲ့ Bitbucket တို့ကမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။
Bitbucket ကကောင်းတယ်၊ ငါ Github ကိုအများသုံးသိုလှောင်ရုံအတွက်သုံးတယ်၊ Bitbucket ကိုပုဂ္ဂလိကတွေအတွက်လုပ်တယ်၊ အများစုကတတိယပါတီတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ Gitorious နှင့် Gitlab တို့ထိုသူတို့မသိခဲ့ပါ။ သူတို့ကိုငါစမ်းသပ်တော့မယ်။
Adrian martinez ဟုသူကပြောသည်
ငါနှစ် ဦး စလုံးစနစ်များကိုအသုံးပြု။ ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီရှိသည့်အားသာချက်များကိုအားသာချက်ယူပါ
Adrian Martinez အားပြန်ကြားပါ
ငါ github ထက်ပိုပြီးကြိုက်တယ်၊ ဒါကငါ့ကိုပုဂ္ဂလိက repos တွေဖန်တီးဖို့ခွင့်ပြုတယ်၊ ငါတို့မှာအမြဲတမ်းအခမဲ့စီမံကိန်းတွေမရှိဘူး။
ငါသည်သင်တို့ကို Bitbuckets ကြိုက်တယ်ဝမ်းသာပါတယ် ... က၎င်း၏မြင့်မားသောအချက်များရှိပါတယ်။
ငါအချိန်နည်းနည်းရတဲ့အခါငါ (နောက်ဆုံးအကြိမ်ငါကပြusingနာရှိခဲ့ပေမယ့်) ကိုခေါင်းစဉ်ကိုလျှော့ချ။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဆိုပြုချက်မှာအနည်းဆုံး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများကိုအရံအဖြစ်သိမ်းထားနိုင်ခြင်း၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ သင် ISPs ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းကို GitHub ကိုယ်တိုင်ထက် ပို၍ အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည်။
စကားမစပ်, OwnCloud သည်လည်း GitHub ၏တူညီသောအင်္ဂါရပ်များကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်မည်လား။
Bitbucket သည်အခြားရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် bitbucket နှင့် ပါတ်သက်၍ အများအားဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာသင်၌ပုဂ္ဂလိက repository ရှိနိုင်သည်၊ Github နှင့်သင်ပေးရမည့်ငွေပမာဏဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်အတွက်အလွန်ကောင်းသောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခမဲ့ပုဂ္ဂလိကသိုလှောင်ရုံတွေရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အရမ်း ၀ မ်းသာမိတယ်။
BitBucket ကမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး၊ အခုကျွန်တော်သုံးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သုံးစွဲသူ ၄ ယောက်ထက်ပိုတဲ့အတွက်ပေးရတာထက်ပုဂ္ဂလိကငွေပေးချေမှုကိုပိုကြိုက်ပါတယ်။ github ကအကန့်အသတ်မရှိပေးထားပါတယ်။